हिमाल खबरपत्रिका | खड्गशमशेरको खड्गो
चन्द्रशमशेरले देवशमशेरलाई श्री ३ महाराज बनेको चारै महीनामा भाइहरूको मद्दतले गद्दीच्युत गरी धनकुटा धपाए। राजधानी शहरमा सजधजसँग राजकाज गरिबसेका महाराजको मन सुदूर पहाडको उराठलाग्दो खुरखुरे डाँडामा के अडिन्थ्यो! तै बरु पाल्पामा खड्गशमशेरलाई जस्तो तैनाथी दिएका भए पनि बस्दा हुन्, तर त्यो पनि नहुँदा हिउँद पनि नपर्खी घरघडेरी हेर्न इलामतिर जान्छु भन्दै हिंडेका, उसै उसै दोर्जलिङ्गतिर पसे। यता रिसिएका महाराज चन्द्रले उनको जग्गाजमीन जफत गरी रुठ्ठै–बुठ्ठै पारिदिए अनि बाध्य भएर केही बिठ्याईं गर्लान् वा ब्रिटिशतिर मिल्लान् भनेर निचुलो गरेर अनुकूलसँग बसे महीनाबारी २ हजार रुपैयाँ दिने वचन दिए। त्यो रकम ब्रिटिशमार्फत दिंदै आएकोमा सं.१९६० बाट खै किन हो आफ्नै हातबाट पठाइदिने सूचना रेजिडेन्टमार्फत दिए।
उता पाल्पाका खड्गशमशेरको कथा अलिक फरक छ। ४२ साल पर्व गर्दा खड्गशमशेरकै ताइँफाइँ बढी थियो। उनैले अघि सरेर बडाबाबु श्री ३ रणोद्दीप माथि पहिलो गोली ठोकेका थिए। उनलाई कम्याण्डर इन चीफ भएर मात्रै बसिरहन मन लागेन, चाँडै श्री ३ हुने महत्वाकांक्षा जागेको थियो। उनका मामा केशरसिंह पहिल्यैदेखिका सहयोगी छँदै थिए। यसको छनक कर्णेल फौदसिंहले श्री ३ वीरशमशेरलाई दिइसकेका थिए तापनि औसर परेको थिएन। एक दिन सलाम गर्न यसो निहुरिंदा खड्गशमशेरको खोकिलाबाट पेस्तोल फत्रक्क खस्यो, तत्क्षण समातिएर पाल्पा गौंडातर्फ धपाइए। पछि उनलाई त्यहाँको तैनाथी पनि दिइयो। खड्गशमशेर साहसी पनि थिए। काठमाडौंकै अनुकरणमा उनले बनाएको पाल्पा दरबारको बाहिरी ढोका सबभन्दा ठूलो मानिन्छ। माओवादीले यस्ता पुराना धरोहर धेरै ध्वस्त पारिदिए, पाल्पा दरबार पनि ध्वस्त हुनेमै पर्‍यो। अहिले त्यसको जीर्णोद्धार भएको छ।
त्यो दरबारको बयान काशीनाथ आदीले गरेका छन्। त्यस महलमा काठमाडौंका दरबारमा जस्तै सुसारे नानीहरूको जमात कति हो कति। एक दिन खड्गशमशेरले काशीनाथलाई भनेछन्, “पण्डितजी, एक्लै सुनसान कोठामा कुक्रुक्क परेर किन सुत्छौ! दरबारमा यतिका केटी छन्, छानेर दुई–तीन वटी लैजाऊ, रमाइलो गर।”
महाराज वीरशमशेरको स्वीकृतिबाट खड्गशमशेरको साथमा पाल्पा बसेका पण्डितले रामरौस गर्न लागेको कुरा कानमा पर्‍यो भने महाराजले बाँकी नराख्ने डर थियो। सधैं होशियार रहनुपर्थ्यो, जागिरको सवाल थियो। पछि रुद्रशमशेरका पालामा पाल्पा दरबार पसेका एकजना नेपाल पण्डितले पनि दरबारका मस्त तरुनीहरूको चर्तिकला धेरै पहिले मलाई सुनाएका थिए। मालिक अनुसारकै अनुचर हुन्छन्, यो उक्ति सार्थकै हो।
मन परेकी रानी तेजकुमारी असमयमै परलोक हुँदा खड्गशमशेरलाई ठूलो शोक पर्‍यो। अत्यन्त मनपरेकी वेगम मुमताजको मृत्युशोकले विह्वल मुगल वादशाह शारजहाँले वेगमको समाधिस्थलमा विश्वलाई चकित पार्ने ताजमहल बनाए जस्तै खड्गशमशेरले पनि आफ्नी रानीको दाहसंस्कार गरेकै ठाउँ गण्डकी किनारको चप्लेंटी ढुंगामाथि रानीमहल बनाए। वीरशमशेरले आफ्नो दरबारमा ग्याँसबत्ती झ्लमल पारे जस्तै खड्गशमशेरले रानी महलमा ग्याँसबत्तीले झिलीमिली पारे। त्यही दरबारमा बसेर खड्गशमशेर मन बहलाउँथे। उनी निकालिएपछि भग्नावशेषमा परिणत भएको यो दरबार राम्रो पर्यटकीय स्थल बनिरहेको छ। खड्गशमशेरको पूरै चालढाल र ऐसआराम प्राइमिनिष्टरको जत्तिकै थियो। उनले श्री ३ महाराजको श्रीपेच मात्र लाउन बाँकी थियो। श्री ३ हरू जस्तै उनी सैरशिकार गर्न तराई र्झ्थे। शिकार खेल्दै जाँदा उनले एक दिन रूपन्देहीको जंगलमा पुरातात्विक वस्तु देखेछन्। उनकै सूचना अनुसार भारतमा कार्यरत पुरातत्वविद् फुहररले उत्खनन् गरेर बुद्धको जन्मस्थल पत्ता लगाए। यसको श्रेय खड्गशमशेरलाई जान्छ।
मेरा एउटा दाजु पश्चिम पाल्पा गौंडा र अर्का दाजु पूर्वको धनकुटा गौंडामा बसेर राजकाज गरिदेलान्, म केन्द्रमा बसेर सुखसँग राजकाज चलाउँला भन्ने चन्द्रशमशेरको धोको बुझेर हो वा इशारै पाएर हो वा आफ्नै मनोवाञ्छाले, खड्गशमशेरले श्रीपेच बनाएर लाउने मन बनाएछन्। यस्तो पोल कसैले लाइदियो अनि चन्द्रशमशेरले उनलाई दगाबाजी गरेको भनेर पाल्पाबाट निकालिदिए। यहाँ रेजिडेन्टले महाराज उपर खड्गशमशेरले दगा गरेपछि कतैबाट सुख पाएनन् भन्दै विस्मात् प्रकट गरेका छन्।